Sida loo shido shaashadda moobilka adiga oo aan taaban batoon | Androidsis
Sida loo shido shaashadda moobilka adiga oo aan taaban batoon
Nerea Pereira | 29/08/2021 12:00 | Khiyaamada Android
Haddii xaaladda rabitaanku waligaa kugu dhacday daar shaashadda moobaylka laakiin aan awoodin inaad samayso badhanka korontada oo jaban, maqaalkani wuu ku xiisi doonaa. Sababta ugu badan ayaa ah in badhankan la jabiyo, laakiin tani had iyo jeer ma aha kiiska maadaama ay u badan tahay inay mar uun kugu dhacday mar aad u baahan tahay inaad fiiriso moobilkaaga laakiin aadan awoodin inaad samayso maxaa yeelay gacmahaagu waa buuxaan. Xaaladahan, qalabku wuxuu leeyahay habab kale oo loo sameeyo.
Soo saarayaasha qalabka mar kasta oo ay u abuuraan shaqooyin cusub aaladaha loo qaadan karo inay yihiin kuwa labaad laakiin sidoo kale aad u faa'iido badan. Macno malahan nooca shaqada ay tahay, maadaama ay si toos ah u siineyso adeegsadaha ikhtiyaarka ah inuu awoodo inuu isticmaalo. Si gaar ahna maanta waxaan u nimid inaan ka hadalno khiyaamooyinka iyo shaqooyinka si aan awood ugu yeelanno inaan dhaqaajino shaashadda moobaylka adiga oo aan taaban.
1 Hababka loo shido moobilka adiga oo aan taaban
1.1 Waxaad isticmaali kartaa akhristaha farta ee taleefankaaga
1.2 Waxaad dhihi kartaa Ok, Google oo arrinta waa la hagaajiyay
1.3 Qalab barnaamijkiisa
1.4 Waxaad kaloo abuuri kartaa badhanka dalwaddii
1.5 Sharad falalka smart
Hababka loo shido moobilka adiga oo aan taaban
Runtu waxay tahay inay jiri karaan kuwo badan sababaha aad ugu baahan tahay inaad shid telefoonka gacanta adigoon taaban badhanka u dhigma. Runtii waxaan ka hadleynaa furitaanka shaashadda caanka ah, howshaas oo aaladda uu ku jiro laakiin shaashadda u xiran tahay si loo badbaadiyo batteriga.
Runtuna waxay tahay inay jiraan sababo badan oo aad u doonayso inaad u shido taleefankaaga gacanta adiga oo aan taaban wax badhan ah haba yaraatee. Tusaale ahaan, laga yaabee inaad wax karinayso oo aad cas-cas tahay, malaha xitaa macno ahaan. Xaaladdan oo kale, ma aha fikrad wanaagsan in la taabto badhanka awoodda, maadaama taleefanku dufan yeelan doono oo wasakhdu ku soo ururi karto badhanka oo sababa dhaawac mustaqbalka.
Waxa kale oo laga yaabaa inay tahay inaad kula raaxaysanayso xeebta saaxiibbadaada ama kuwa aad jeceshahay oo aad rabto inaad hubiso ogeysiisyada si aad u ogaato haddii qof kuu soo diray wax xiiso leh. Laakiin dabcan, inta u dhexeysa ciidda iyo biyaha cusbada, laba walxood oo dhaawici kara taleefankaaga, waxaa fiican inaad ka fogaato taabashada jirka.
Xalka? Waa hagaag, way u fududdahay sida furitaanka shaashadda taleefankaaga adigoon ku qasbanayn inaad riixdo badhanka u dhigma. Oo marka la arko ikhtiyaarrada kala duwan ee la tixgelinayo, waxaa ka wanaagsan in laga nabadgalo ka xun. Aynu aragno siyaabaha aan kuu doorannay oo kaa saari kara dhib ka badan hal.
Kahor intaadan sii wadin hababka kala duwan si aad u furto shaashadda taleefankaaga adiga oo aan riixin badhan kasta, kuwan soo socda waa in la xusaa. Marka laga reebo hababka biometrically furaya aaladda, Hababka kale ee awoodi doona inay shaashadda shidaan sida furaha sirta ah, biin ama qaab waa inay marka hore si sax ah u galaan si mobile -ku gabi ahaanba u furmo.
Waxaad isticmaali kartaa akhristaha farta ee taleefankaaga
Sidaas bay qayb uga yihiin Laba hab oo furitaan oo ah kuwa ugu caansan oo isku dhafan ayaa ah: dareeraha faraha iyo furitaanka wejiga. Ikhtiyaarada Amniga waxaad ku habayn kartaa labada hab ama mid kaliya haddii aaladdu leedahay mid keliya. Markaad dejiso fartaada ama wejigaaga, waxaad awoodi doontaa inaad furto aaladdaada - kiiska koowaad - adoo taabanaya dareeraha ama - kiiska labaad - adoo eegaya shaashadda si kamaradda hore taleefanka u furto.
Runtu waxay tahay in habkani yahay midka ugu raaxada badan, in ka badan hadda Telefoon kasta oo meel dhexe ah wuxuu hore u haystay nidaam furitaan weji oo dhammaystiran. In kasta oo habka aqoonsiga faro -gelinta sidoo kale uu yahay mid aad waxtar u leh, haddana waxaa muhiim ah in la ogaado in mararka qaarkood laga yaabo inaadan rabin inaad taabato taleefanka.
Ama maxay isku mid yihiin: haddii ay tahay sababta oo ah badhanka demin / daminta uusan shaqaynayn, furitaanka shaashadda moobaylkaaga adoo adeegsanaya akhristaha farta waa fikrad aad u fiican. Laakiin haddii ay tahay inaad ka fogaato wasakhaynta taleefanka, xitaa ha ka fikirin taas maadaama aad dhaawici karto dareeraha bayoolojiga oo dhibaatadu aad bay u weynaan doontaa.
Waxaad dhihi kartaa Ok, Google oo arrinta waa la hagaajiyay
Guud ahaan google caawiye Waxaa durbaba laga hawlgaliyay warshadda dhammaan aaladda Android. Laakiin sidoo kale waxaad haysataa ikhtiyaar inaad ku soo dejiso barnaamijka Kaaliyaha Alexa ee Amazon oo laga heli karo Google Play. Iyada oo kaaliyaha la shaqeynayo, waxaad hadda furi kartaa mobilada adiga oo adeegsanaya amarka firfircoonaanta kaaliyaha codka, kaas oo ah habka ugu habboon ee lagu furi karo moobaylka marka gacmahayagu mashquul yihiin ama wasakh yihiin. Sidaa darteed ha ka waaban oo sharadka adeegso Kaaliyaha Google si aad u furto taleefankaaga adiga oo aan taaban.
Haddii aad haysato qalab duug ah oo aan lahayn ikhtiyaarrada kor ku xusan markaa waxaa lagama maarmaan noqon doonta in la isticmaalo qalab dhinac saddexaad ah. Mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan (ugu qiimeynta wanaagsan uguna khibrad badan tan) ayaa ah Shaashadda Muuqaal, kaas oo mas'uul ka ah daminta aaladda marka aad jeebka ku riddo ama aad miiska saarto. Taas beddelkeeda, way iftiimaysaa marka aad jeebkaaga kala soo baxdo ama aad istaagto. Waxay sidoo kale ku haysaa aaladda intaad isticmaaleyso maadaama ay ogaato dhaqdhaqaaqa gacmahaaga.
Shaashadda Cuf-isjiidka - On / Off
Waxaad kaloo abuuri kartaa badhanka dalwaddii
Qalabka qaarkood waxay shaashadda ku leeyihiin badhanka guriga halkii badhanka guriga ee xarunta. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku riixdo shaashadda sidii ay ugu dhacday badhamada jirka, iyo adigoon taaban badhanka awoodda. In kasta oo tan loogu talagalay marka hore waa inaad ku dhaqaajisaa goobaha shaashadda dhexdeeda, adoo raadinaaya ikhtiyaarka "Ku fur furaha bilowga" iyo dhaqaajinta ikhtiyaarka.
Sharad falalka smart
Mar kasta telefoonnada gacanta ayaa leh habab badan oo ay ku dhaqaajiyaan shaashadda iyaga oo aan taaban badhanka awoodda, ikhtiyaarrada qaarkood oo leh walxaha qalabka sida shaashadda ama dareemayaasha. Markaa halkan waxaad ku adeegsan kartaa laba hab oo ah firfircoonaanta shaashadda marka aad soo qaaddo taleefanka iyo tuubada labada jeer. Kuwani waa hawlo laga heli karo goobaha marin -u -helka, oo markaad dhaqaajiso waxaad yeelan doontaa labadan siyaabood oo kale oo aad ku dhaqaajiso taleefanka adiga oo aan riixin badhanka awoodda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Khiyaamada Android » Sida loo shido shaashadda moobilka adiga oo aan taaban batoon
Sida loogu dhejiyo Instagram iyo tabaha kale ee muhiimka ah
5ta codsi ee ugufiican ee lagu helo dabaq